August 6, 2019 - Myitter
August 6, 2019 Myitter 0
မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ် ကြေငြာပါပြီ မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ် ကြေငြာပါပြီ။၆-၈-၂၀၁၉ / ည(၉း၀၀)နာရီ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ နောက်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ် နေ သောလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာပိုမိုအားကောင်းလာကာမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာ အ နောက်ဖက်သို့ရွေ့လျှားကာနောက်(၁၂)နာရီအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ဖက်ကမ်း သြရိဿပြည်နယ်ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ကာ ကုန်း တွင်းသို့ဝင်ရောက် သွားမည်ဟု […]
မနက်စာ ထမင်းကြော်တပွဲကို ၇၀၀၀ တောင်းတဲ့ မကွေးကားကွင်းနားက ရိုက်စားဆိုင် ဝင်စားလို့ ရတယ်ပြောတဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို ဝင်စားကြည့်လိုက်တော့..(မကွေးကိုလာမယ့်သူများ သတိထားပါ) မ​ကွေးကိုလာမဲ့ မိတ်​​ဆွေးများသတိထားကြပါ။ မ​ကွေးကားကွင်း အ​ဝေရာလမ်းဘက်​ကို ထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​ ​ကောင်းမွန်​​ဆေးရုံဘက်​ကိုထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​​ပေါ့ ​ အ​ပေါက်​အထွက်​မှာ ကပ်​လျှက်​က စား​သောက်​ဆိုင်​ ​ရွှေနန်း​တော်​တည်းခိုခန်းနဲ့ တွဲဖွင့်​ထားတဲ့ဆိုင်​ အဝါ​ရောင်​logo ​လေး​တွေနဲ […]
ကားချင်းချိတ်မိပြီး ယာဉ်မေတ်ာတဆ ဖြစ်ခဲ့သူ နှစ်ဦးရဲ့ တစ်မျိုးစီ လှပနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြသနာ သေးသေးလေးကနေ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် မာန်တက်ပြီး အလျှော့မပေးကြလို့ လူသတ်မှုအထိ ဖြစ်နေတာတွေကို စိတ်မကောင်းစရာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်….. ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေကလည်း မြေနုကျွန်းလုကြတဲ့ ကိစ္စကြောင့် လူ (၃၀) ကျော် သေတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ. . .ဒါတွေဟာ ပြသနာတစ်ခုကို […]
လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် ဆင်းကတ်အားလုံး ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဟု ဆို
ဖုန်းဆင်းကဒ်များ အားလုံး လက်ဗွေစနစ်ဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ မတိုင်မီ မှတ်ပုံပြန်တင်ရမည် နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၆။ နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးအတွက် အသုံးပြုနေသောတယ်လီဖုန်းဆင်းကဒ်များအားလုံးကို Biometric စနစ်တွင် မှတ်ပုံ ပြန်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ကျောက်တန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးမြမြမျိုး မေးမြန်းသည့် […]
ကင်းမြီး​ကောက်​ ကင်း​ခြေများ ကိုက်​ခံရလျှင်​ အမြန်​ဆုံးနှင့်​အလွယ်​ဆုံး အဆိပ်​​ဖြေနည်းမျာ
မင်္ဂလာပါ လူသားတိုင်းသိသင့်​​သောအရာမို့ ထပ်တင်​​ပေးလိုက်​တယ်​​ဗျာ.. ကင်းမြီး​ကောက်​ ကင်း​ခြေများ ကိုက်​ခံရလျှင်​ အမြန်​ဆုံးနှင့်​အလွယ်​ဆုံး အဆိပ်​​ဖြေနည်းများ⚡⚡⚡ ၁။ ကင်းခြေများ မတော်တဆ ကိုက်ခံရပါက –သင်္ဘောသီး အစိမ်း အခွံမှ အစေးကို ကိုက်ခံရသော နေရာတွင်လိမ်းပေး ခြင်းဖြင့် အဆိပ် ချက်ချင်း ပြေနိုင် ပါတယ်။ ၂။ ကင်းမြှီးကောက် […]
Victora သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု မှ တရားခံငါးဦး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်…
သက်ငယ်မုဒိမ်း နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ နေပြည်တော် Wisdom Hill မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်း အတွက် ကျူးလွန်သူ တရားခံပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် …. ပြည်သူများနှင့် အနုပညာရှင်များ အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူတွေအတွက် ဒီနေ့ဟာတော့ အပျော်ရွှင်ရဆုံးနေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ မိသားစု ၄ ဦးနဲ့အတူ ဆရာမ […]
မြို့ပတ်ရထားပေါ်က ဘဝစာမျက်နှာ တစ်ခု
မြို့ပတ်ရထားပေါ်က ဘဝစာမျက်နှာ တစ်ခု ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့ပတ်ရထားတွေပေါ်မှာ မယ်ဒလင်တလက်နဲ့ အလှူခံပြီး ဘဝအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေသူ အဘိုးအို တစ်ဦးပါ။ ဦးတရုတ်ကြီး (ခေါ်) ဦးကျင်တိတ်ဟာ ငမိုးရိပ် သွပ်ဝိုင်းကြီးရပ်ကွက်ထဲက မျက်မမြင်အိမ်ရာဝန်းမှာ တစ်ဦးတည်း အိမ်ငှားပြီးနေ နေတာ အနှစ်၂၀ လောက် ရှိနေပါပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက် […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ မေမေတွေအားလုံး အရေးကြီးဆုံး သတိပြုရမည့် ကလေး ကျန်းမာရေးအတွက် အချက် တစ်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ မေမေတွေအားလုံး အရေးကြီးဆုံး သတိပြုရမည့် ကလေး ကျန်းမာရေးအတွက် အချက် တစ်ချက် ကလေး ကျန်းမာရေးအတွက် မေမေတွေ သတိပြုရမဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက်လေး (၁)ချက် ဒီနေ့ မျှဝေပေးမယ်နော်။ မင်မင်ရဲ့ My Shop ဆိုင်လေးက ( 25.7.2019 ) […]
၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်၊ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မိုးသည်းထန်ခြင်းတို့ ဖြစ်မည်
လာမည့် ၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင် ၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်၊ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မိုးသည်းထန်ခြင်းတို့ ဖြစ်မည် မိုိးဇလ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၆)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (Low Pressure Area)သည် […]
နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ……. အမြင့်မားဆုံးရွှေတံဆိပ်နှစ်ခုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ သားတို့အမွှာညီအစ်ကို
နိူင်ငံပေါင်း(၂၀) ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ အမြင့်မားဆုံးရွှေတံဆိပ်နှစ်ခုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာနိူင်ငံမှ သားတို့အမွှာညီအစ်ကို… ကမ္ဘာမှာမြန်မာ့အနုသုခုမယဉ်ကျေးမှုကိုချပြပြီးအမြင့်ဆုံးရွှေတံဆိပ်(၂ )ဆုကိုရယူခဲ့တဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တော်ကြသော မျိုးဆက်သစ် ညီငယ်များ Russiaနိုင်​ငံ Vladivostok မြို့ Okeah Center မှာကျင်းပတဲ့ Children of the World 2019 နိုင်​ငံ​ပေါင်း(၂၀ )၀င်​​ရောက်​ယှဉ်​ပြိုင်​ရာမှာအမြင့်​မားဆုံး​ရွှေတံဆိပ်​နှစ်​ဆုကိုမြန်​မာနိုင်​ငံမှ ဆွတ်​ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်​ရှင်….crd-myatnuthway Russia […]